जीवन भरिएका जरा र डाँठ « Ghamchhaya
जीवन भरिएका जरा र डाँठ
Published On :7March, 2019 10:29 am
एकदिन बाँसको झ्याङ फाँडेर जरा उखाल्नका लागि एक्साभेटेर बोलाएर जरा उखाल्न लगाउँदै थिएँ । त्यसैबेला परबाट एकजना सुकिलामुकिला ब्यक्ति नजिक आएर हेर्न थाले । जराहरू उखालिँदै थिए, उनले मतिर हेर्दै भने, ‘भाई म एकदुईवटा जराहरू लिएर जाउँ ?’ म अचम्म मान्दै उहाँतिर हेरेँ र हुन्छ भन्दै मुन्टो हल्लाएँ । उहाँले नजिकै रहेको बोरा टिप्नुभयोे र एक एक गर्दै मैले फाल्न लागेका जराहरू त्यहाँभित्र हाल्न थाल्नुभयो ।
मैले कौलुहलताका साथ सोधेँ, ‘यो जरा लगेर के गर्नुहुन्छ ? आफूलाई त कता लगेर फाल्नु जस्तो भएको छ ।’ मेरो प्रश्नको जवाफ दिनुको साटो उहाँले मुस्कुराउँदै ‘१०–१५ दिनपछि भेट्नु न बताइहाल्छु नि के गर्न लागेको’ भन्दै आफ्नो बाटो लाग्नुभयो । त्यसो भएको त्यस्तै १५–२० दिनपछिको कुरा हो बारम्बार नेपालीलाई दुःख दिने नेपाल बन्दको दिन थियो । यातायात चलाउन नदिइएपछि आफ्नो कामका लागि पैदल हिँडनुको विकल्प थिएन । म हिँड्दै थिएँ, बाटो छेउको घरबाट आवाज आयो ‘भाइ –भाइ’। आवाज आएतर्फ हेरेँ, उहाँ त्यहि जरा लाने दाई हुनुहुदो रहेछ । हात हल्लाउँदै मलाई बोलाई रहनुभएको थियो म खुरुखुरु उहाँको घरमा गएँ । उहाँ मलाई त्यही मैले बल्ल बल्ल तह लगाएका बाँसका जरा देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो ।
ति काम नलाग्ने जरालाई उहाँले खरायो,जरायो,कछुवा, परेवा आदि पशुपंक्षीका सुन्दर रूप दिइसक्नुभएको रहेछ । म त्यो देखेर मन्त्रमुग्ध भएँ। ओल्टाइपल्टाई त्यो पहिलाको बाँसको जरा र अहिले आकृति कुँदिएको जराको फरक केलाएँ र उहाँको कामलाई मनमनै सलाम गरेँ । एउटा उखान याद आयो ‘जान्नेलाई श्रीखण्ड नजान्नेलाई खुर्पाको बिँड’ । त्यस उखान बाँसका जरा भरी चरितार्थ भएको देखियो त्यस दिन । ति दाजु अर्थात् ४५ वर्षीय एरिक महतले मलाई असामान्य कलाको सुन्दरतासँग साक्षातकार गराइनदिनु भएको थियो ।
त्यो दिन मलाई कामको हतारो परेकोले उहाँसँग विदा मागेर हिँडेँ । राति निदाउनुअघिसम्म उहाँको कलाकृति दिमागमा आइरहेको थियो । भोलीपल्ट बाँसका जराका कलाबारे सम्पूर्ण कुराको जानकारी लिन जाने निश्चय गर्दै सुतेँ । भोलिपल्ट बिहान म एरिक दाईसँग भेट्न गएँ उहाँसँग कलायात्राको बारेमा सोधेँ, ‘कसरी सुरु भयो तपाईँको काम ? उहाँले कुमारजीले अगस्त्य मुनीलाई श्रीस्वस्थानीको कथा बेलीबिस्तार गरेझैँ यसरी आफ्नो कला यात्राको वर्णन गरे ।
उहाँले करिब सात वर्षअगाडि आफ्नो कामको सिलसिलामा दार्जलिङ पुग्दा बाँसले बनाएको टेबुल ल्याम्प देखेकारहेछन् । त्यो ल्याँम्प उनलाई यति आर्कषक लागेछ कि आफूले पनि एउटा त्यस्तै टेबुल ल्याँम्प बनाउने निश्चय गर्न पुगेछन् । फर्केर घरमा आउनेबित्तिकै अम्बाको रुखको हाँगाबाट त्यस्तै टेबल ल्याँम्प बनाए । परिवार सदस्यबाट आहा ! कति राम्रो ल्याँम्प भन्ने सुन्न पाउँदा पनि हौसला नै बढेको रहेछ । घरमा पाहुना आउँदा प्रायले सोध्थे, ‘कति चिटिक्क परेको ल्याँम्प कहाँबाट ल्याएको?’ । एरिक दंग पर्दै उत्तर दिन्थे, ‘मैले आफैं बनाएको होे’ । यस्तै प्रोत्साहानका शब्दले उनलाई आफू भित्रपनि कला भएको अनुभूति दिलायो । यसरी रहरै –रहरले आफ्नो कलायात्रा सुरुवात भएको एरिकले सुनाए ।
विभिन्न ठाउँको यात्राको क्रममा भेटिएका बाँसका जरा, अम्बा, बकैना, काँडाको डाँठहरू जम्मा गरि त्यसबाट माछा ,सर्प,मयुर, बकुल्ला, हात्ति, घोडा, घोरल,मृग डल्फिन आदि जनावर तथा चराचुरुङ्गिका आकृतिहरू बनाउन थाले एरिक । मानिसको इच्छाअनुसार बिभिन्न जातको प्रतिनिधित्व गर्ने खालका ब्यक्तिका आकृतिहरू र देवताहरू जस्तै गणेश र बुद्ध आदिका आकृति पनि उनले बनाएका छन् । जलचर, थलचर र उभयचर सबै किसिमका जनावर ,पशुपंक्षी तथा किरा फट्याङग्रासमेत जरा र डाँठबाट बनेका छन् । उनको कला संग्रह भएको ठाउँमा पुगेर हेर्दा कुनै अन्यत्रको ग्रहमा आइपुगेको जस्तो लाग्छ ।
बाँसको जरा तथा रुखको डाँठले मात्र एरिकको कला मन भरिएको छैन । विस्तारै उनी सल्लाको गाँठो,अण्डाको के्रट, च्याउका पात ,फूलका पात आदि बस्तुहरू प्रयोग गरि अत्यन्त मनमोहक आकृतिहरू बनाउन तल्लिन हुन थालेका छन् । ‘कोईलाको खानीबाट नै हीराको जन्म हुन्छ’ भनेझैँ काम नलाग्ने ठान्दै फालिएका बस्तुलाई पनि एकाग्रता, लगन र परिश्रमबाट जीवन्त कलामा परिणत गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण पस्कन सफल भएकोमा गर्व गर्छन् एरिक ।
नारायण गोपाल चोकबाट केही उत्तरपट्टि जाँदा केही मिटर अगाडि दाहिने मोडिँदा मन्डिखाटार जाने बाटोमा आफ्नै घरको सटरमा शो–रुम बनाई बिक्रिबितरण र प्रचारप्रसार गर्दै आएका छन् । बजारमा पाईने अरु सजावटका सामानहरू भन्दा सस्तो,टिकाउ र कलात्मक हुने हुँदा उपहार दिन तथा सजावटका लागि ग्राहकहरूको माग बढिरहेको बताउँछन् एरिक महत । मासिक ३० देखि ३५ हजारसम्म आम्दानी हुनेगरेको र प्रर्दशनिमा आफ्नो सामानहरू २ देखि ३ लाखसम्म ब्यापार हुनेसमेत महतले बताए ।
भियतनाम र अफगानिस्तानमा यस्तै कलाहरू विश्व प्रसिद्ध भएका छन् तर आफूले बनाएका त्यस्तै कलाकृतिहरू विदेशमा प्रचारप्रसार र निर्यात गर्न नसकिरहेको असन्तुष्टी एरिकलाई छ । नेपालमा भन्दा १० गुणा बढि मूल्यमा बिक्रि गर्न सकिने आफ्नो कलाकृति कुनै ब्यापारी वा अन्तर्राष्ट्रिय गैह्र सहकारी संस्थामार्फत विदेश निर्यात गर्ने सोचमा रहेको बताउनुभयो ।
सैद्धान्तिक शिक्षाको पनि आवश्यकता नपर्ने र फुर्सदको समयमा आफ्नो वरिपरि भएका सग्ला तथा खेर गइरहेका वस्तुहरूमा अलिकति सीप ,परिश्रम र लगानी गरिदिए अहिलेका युवालाई दुव्र्यसनबाट पनि टाढा राख्दै आम्दानीसमेत दिलाउँछ । यसले कामका लागि विदेश जानुपर्ने समस्याबाट समेत मुक्ति दिलाउने भएकाले आजका युवाहरू अमूल्य जीवनको सदुपयोग गर्न सक्ने सन्देश पनि एरिक महतका कामले दिएका छन् ।
उहाँको सबै कुरा सुनिसकेपछि बिदा हुने बेलामा मलाई पनि आफ्नो पाँच वर्ष पुग्न लागेका छोरीको जन्मदिनका लागि उपहारस्वरुप एक मयुरको आकुति भएको सुन्दर आकृति लिन मन लाग्यो । विशेष छुटसहित किनिएको त्यो मयुर छोरीले जन्मदिनमा पाएको उपहारहरूमध्ये सबैभन्दा बढि मनमोहक उपहार बन्न पुग्यो । उनले त्यो मयुर कति मन पराईन भने खाँदा ,बस्दा, हिँड्दा यहाँसम्म कि सुत्दापनि हातैमा लिएर सुतिन् । स–साना बालबालीकाहरूलाई समेत लोभ्याउने उनको कला साँच्चै नै प्रशंसायोग्य छ ।
नयाँ वर्षमा राहत उपहार
प्रधानमन्त्री केपी शर्माको शब्दमा भन्दा आज प्रायः सबैले “भारी मन लिएर” नयाँ वर्षको शुभकामना आदानप्रदान
कोरोना यसै गरी अस्ताओस्
कोरोनाको कहरबीच हामीलाई विक्रम संवत् 2076 ले छोडेर जाँदैछ | काठमाडौंको नैऋत्य विन्दुस्थित चन्द्रागिरीमा दिन
कोरोना संक्रमितको संख्या तीन हजार नजिक, ३ सय ३३ डिस्चार्ज
नेपालमा कोरोना कुल संक्रमितको संख्या दुई हजार नौ सय १२ पुगेको छ । स्वास्थ्य